Sezvo isu tese tichiziva, email kushambadzira kunoshanda saka ini handizokubhori newe iyi mashoko. Pane kudaro, ngatione kuti chii chinongedzo chekushambadzira cheemail uye nezvavanogona kukuitira.
Imeyili kushambadzira vanopa mazano kazhinji vanotora mafomu matatu, an Email Kushambadzira Agency, Freelancer, kana mushandi wepamba paemail Service Provider (ESP) kana Chinyakare Agency. zvese izvi zvine hunyanzvi uye ruzivo izvo zvakanangana nekuvandudza nzira dzinobudirira dzekutengesa email. Zvisinei, kugona kwavo kwepamoyo uye zvinopihwa zvevhisi zvinosiyana, zvakanyanya.
Saka iwe unoda email wekushambadzira wezano? Kana zvirizvo, rudzii? Zvibvunze mibvunzo inotevera.
Mhinduro yangu yekutumira yakandinakira here?
Mhinduro dzangu dzeESPN kana dzemumba dzinopa zvese zvandinoda here? Ndiri kushandisa maficha andiri kubhadhara here? Zviri nyore kwandiri kushandisa? Iko kuburitsa kwangu kuri mumutsetse nemutengo wangu?
Chii chandiri kutumira?
Ini ndarongedza kuti chii chandinofanira kutumira? Senge maemail Ekutambira, Matsamba eNhau, Akasiiwa Maodha, Kukwidziridzwa, uye Reactivation maemail? Chii chandiri kushaya? Iko email yekutaurirana cheni kuputsika?
Ndinofanira kunge ndichitumira rini?
Ndinofanira here kushandisa ruzivo rwuchienderana nezviito zvemugashi wangu kutumira maemail, senge chena kurodha mapepa Zvakadii nezveemaema-anotyairwa nemaemail, akadai sevatengi-vezororo chete kana zviyeuchidzo Ndeipi kalendari yangu yekunyora yetsamba dzangu? Ndiri kuchengeta here yekushambadzira maemail ekusimudzira?
Ndeipi mitemo yangu yebhizinesi?
Ini ndafunga kuti chii chinokonzera meseji kutumirwa? Ndeapi data anodiwa kutsigira meseji? Inofanirwa here kuti data yekuisa kunze ive yechinyorwa kana otomatiki? Ndezvipi zvirimo zvinotumirwa kana iwo mamiriro akasangana? Chii chiri chirongwa changu cheMazita nemusoro wenyaya? Ndinofanira kuisanganisa here? Chii uye ndinofanira kuyedza?
Ndezvipi zvinangwa zvangu?
Ini ndakamisa zvinangwa, senge nhamba yekutora, kutengesa, kunyoresa? Chii chandiri kuronga kuita kuti ndikure rondedzero yangu? Chii chandingaite kudzikisira kukwezva?
Ndezvipi zvandinoda zvekuzivisa?
Ini ndinofanira here kuona zvinopfuura kungodzvanya uye kuvhura kuvandudza mhedzisiro yangu uye kuratidza nyaya yangu? Ini ndinoda pombi yangu mune yekunze data senge CRM uye webhusaiti analytics maturusi ekumisikidza uye nekuteedzera kubudirira kwangu metric?
Email kushambadzira chiitiko chakakosha chevashambadzi vazhinji, asi maitiro acho anogona kunge akaoma uye achitora nguva. Anemail wekushambadzira email kana agency anogona kukubatsira kuzadzisa zvinangwa zvako uchikubvumidza kushandisa nguva yako kushandisa zvimwe zvebhizinesi rako.
Unoda zvinopfuura kungonzwisisa? Sisitimu inotarisana neemail inogona zvakare kupa nemasevhisi ekutsigira, pamwe nekutungamira, izvo zvinodiwa kuti utange uye utsigire yakasimba email yekutengesa chirongwa; verenga sei-kuhaya email yekushambadzira agency kudzidza zvakawanda.
Tags: email mubatsiriEmail MarketingEmail Kushambadzira Anobvunza